खराब नियत राखेर सञ्चालन हुने सहकारीहरु कारबाहिको भागेदार हुन्छन् : नेफ्स्कून अध्यक्ष बस्नेत - Cooperative News Service
खराब नियत राखेर सञ्चालन हुने सहकारीहरु कारबाहिको भागेदार हुन्छन् : नेफ्स्कून अध्यक्ष बस्नेत
नेपालमा हाल ३४ हजार भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन । त्यसमध्ये करीव १४ हजार वचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन । देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? यी संस्थाको गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले के गरिरहेको छ , यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष डिवी बस्नेतसगँ गरीएको कुराकानी ।
नेपालमा हाल सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?
२०४५ सालमा पुर्वजहरुले बचत गरेको पैसालाई व्यवस्थित गर्न भनेर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको स्थापना गर्नुभयो । जब सहकारी ऐन नियमावली ०४८/०४९ आयो , त्यसपछि २०५० सालमा सहकारी ऐन अन्तर्गत दफा २६ लाई टेकेर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ औपचारिक रुपमा दर्ता भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा नेपालमा करिब १४ हजारकोे हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु दर्ता भएको भनिएपनि हाल आएर एकिकरण हुने क्रम पनि चलिरहेको हुँदा यसमा केहि तलमाथी हुन सक्छ । तर पनि बचत तथा ऋण अभियान अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको अबस्था छ । सबै जिल्लामा यसले सेवा विस्तार गरेको छ । देशको वेरोजगारी दर केहि हदसम्म भएपनि घटाउन मद्धत गरेको छ । सदस्य संख्याको कुरा गर्नुपर्दा अत्यधिक संख्यामा महिलाको पनि सहभागिता छ । यसले गर्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था फस्टाउँदै गएको छ ।
नेफ्स्कूनमा आवद्ध सहकारीहरुका साथै अन्य वचत तथत ऋण सहकारीको सवालमा के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघले ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) विगत करिब ३ दशक देखि बचत तथा ऋण सहकारी अभियान मार्फत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनस्तर उकास्न क्रियाशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र संघहरुको राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय संघ हो । यस केन्द्रीय संघले दर्जनौ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँगको साझेदारीमा बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थागत विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै संघमा आबद्ध नभएका सहकारीको गुणस्तरियतामा अभिवृद्धी गर्ने हिसाबले कार्यहरु गर्दे आइरहेका छौ । जस्तैः सहकारी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सरसल्लाह दिने, हिसाव किताव कसरी सुरक्षित राख्ने, ऋण लगानी गर्दा कसरी गर्ने, सदस्यहरुको लागि सहकारी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले जानकारी गराउँदै आइरहेका छौ । त्यस्तै सहकारीका लागि चाहिने सम्पुर्ण खाताहरु, आवश्यक पर्ने स्टेशनरीहरु हामीले उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेका हुन्छौ । समय अनुसार परिमार्जित हुँदै आफ्नै सफ्टवेयर विकाश गरेर त्यसैबाट हिसाबकिताब सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौ । नियमित रुपमा अनुगमन पनि गरिरहेका छौ । त्यसो हुँदा हामीले सम्पुर्ण सहकारीको विकासका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेका छौ ।
राज्यले तिन खम्बे अर्थनिति ल्याइरहँदा एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई पनि मानेको छ, यो बिचमा बचत तथा ऋण सहकारीले राज्यले लिएको यो अर्थ्नितिलाई कसरी सघाउ पुर्याउला ?
पक्कैपनि, अहिले जुन रुपमा राज्यले तिनखम्बे अर्थनिति ल्यायो र त्यसमा एक खम्बाका रुपमा सहकारीलाई हेरेको छ यो एकदमै खुसीको कुरो हो । यति भनिरहँदा सहकारीले धेरै कुरामा राज्यलाई सघाउदै आइरहेको छ । सहकारीले हजारौँको संख्यामा मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान विवश युवाहरुलाई सहकारीमार्फत उत्पादनशिल क्षेत्रमा आवद्ध गराउन र देशमै रोजगारी छ, भन्ने कुरा हामीले बिभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकारी दिँदै आइरहेका छौ । त्यस्तै दुरदराजका लागि भनेर सरकारले ल्याएको बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि सहकारीलाई सहभागि गराएर हरेक कुराहरुमा साथ अनि सहयोग गरिरहेका छौ, त्यति मात्र नभएर सरसफाई र वातावरणको क्षेत्रमा पनि हामीले सहकारीलाई लगाएका छौ ।
केन्द्रमा बसेर नेफ्स्कूनले अनुगमन गरिरँदा देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरुले कसरी काम गरीरहेका छन्, नमुना सहकारीहरुको अबस्था कस्तो छ ?
नेपाल बचत तथा तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ एसियाली ऋण महासंघ को सदस्य छ । एसियाली ऋण महासँघ विश्व ऋण परिषदको सदस्य छ । यी संघ तथा परिषद्मार्फत हामीले नेपालमा सञ्चालित सहकारीहरुलाई कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ, त्यसको मोडालिटि तथा संस्था कसरी आफ्नो निति, बिधि तथा प्रबृत्तिमा बस्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा थाहा पाउन उहाँहरुबाट एउटा टेक्नोलोजी ल्याएका छौ । त्यो टेक्नोलोजि हामी सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउँछौ, उहाँहरुले आफै अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ र आफु कहाँ कहाँ के के कुरामा कमजोर रहेछु त भन्ने कुरा आफै थाहा पाउनुहुन्छ । साथै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा प्राबिधिकहरुले त्यसको बारेमा जानकारी दिने गर्दछन् । त्यस्तै नेपाली ब्राण्ड भनेर पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ । त्यस्तै जोखिममा आधारीत सुपरिवेक्षण भनेर अर्को कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौ । यी तिनवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यी बाहेक पनि हामीले जिल्ला संघ मार्फत उनिहरुलाई निरन्तर अनुगमन गरिनै राखेका छौ ।
केहि बचत तथा ऋण सहकारीले आर्थिक अपचलन गरेको, जम्मा गरेको पैसा खाएर भोगेको सम्बन्धी समाचार हामीले सुन्ने गर्दछौ , यसको नियमनका लागि नेफ्स्कूनले के गरिरहेको छ ?
अहिले नेफ्स्कुनले आफुसँग आवद्ध सदस्यहरुलाई मात्र हेर्ने गरेको छ । हाम्रा सदस्यहरुमाथी निगरानी राख्ने गरेका छौ । धेरैजसो सहकारी ऐन, राष्ट्रबैंकको ऐनले बित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा सबैप्रकारको सेवा सदस्यहरुलाई मात्र दिनुपर्छ भनेको छ । तर समान्य तालिम तथा शिक्षा हामीले सबैलाई दिइराखेका छौ । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरु पैसा खाएर भागेको कुरा बेलाबेलामा मैले पनि सुन्ने गरेको छु । भाग्यवस हामीसँग आवद्ध भएका सहकारी सञ्चालकहरु त्यस्तो भोग्नुपरेको छैन । तर मलाई के लाग्छ भने सहकारी सञ्चालकहरु पैसा खाएर भागेको होइनन, सहकारी चलाउन नजानेर मानिसहरु पलाएन भएका हुन । जब सहकारी घाटामा जान थाल्छ तब मानीसहरु घरजग्गा बेचेर पनि पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आइपर्दा उनिहरु भागेका हुन । तर उचित किसिमको तालीम दिन सकियो भने यो स्वतः हटेर जान्छ । तर भोलीको दिनमा कोहि पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यो अबस्था भोग्न नपरोस भनेर हामीले स्तरीकरण कोष डिजाइन गरिरहेका छौ र सरकारले पनि नयाँ सहकारी ऐन २०७४ मा यो कोष नेफ्स्कूनले पनि चलाउन सक्ने कुरा समावेश गरिदिएको छ । यो कोषमा हामीले पैसा जम्मा गर्छौ र जुन बित्तिय संस्था समस्यामा पर्छ, त्यो संस्था सामान्य अवस्थामा नआउदासम्म हामीले बिना धितो ऋण दिन्छौ । तर यसका लागि सबैको साथ अनि सहयोग भने आवश्यक छ ।
नियतनै खराब राखेर सहकारी संचालन गरेको पाउनुभयो भने ?
हामीले सुधार्न खोज्दाखोज्दै पनि जानाजान त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई त कुनै पनि हालतमा माफि दिनै सकिदैन । त्यस्तो कार्य गर्ने जो कोहि संस्थाका सदस्यहरुलाई हामी ठगिको मुद्धामा सरकार समक्ष कारबाहिका लागि आह्वान गर्छौ ।
२४ र २५ गते राजधानीमा हुन लागेको दुइदिने साकोस समिटमा के के विषयमा छलफल हुनेछ ?
यो चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी अथवा बित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि अत्यन्त महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो । त्यसमा हामी पुर्ण रुपमा टेक्नोलोजीका पक्ष तर्फ नै केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौ । बचत तथा ऋण सहकारीले अहिले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानको पक्षमा ब्यापक छलफल हामीले चलाउनेछौ । एकिकरणको पक्षमा कुरा गर्छौ, त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय टेक्नोलोजीका विषयमा जानकारी दिन्छौ, स्तरीकरण को कुरा गर्छौ । साथै विशेषगरी बजारले खोजेको विषयमा केन्द्रित रहेर उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी अग्रसर हुने भन्ने बारे ब्यापक विचारविमर्श गर्ने तथा यससँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय विज्ञद्वारा छलफल चलाउँछौ ।
यो समिटमा को को सहभागि हुन सक्छन् ?
विशेषगरी यो कार्यक्रम नेफ्स्कूनकै सदस्यहरुका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो । तर पनि हामिसँग आबद्ध नभएका बित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाका सदस्यहरुले पनि सहभागीता जनाउन सक्नुहुनेछ । नेफ्स्कूनमा आवद्ध सदस्यहरुलाई सहभागि हुन केहि शुल्क कम लाग्छ भने यो भन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्ने लाई भने केहि बढी शुल्क लिएर हामीले कार्यक्रममा सहभागि बनाउँछौ ।
कान्तिपुरी बहुउद्देश्यीय सहकारीद्वारा सेवा केन्द्र विस्तार
बिराटनगरमा तुलसी मोटर पम्प ईण्डष्ट्रीज संचालनमा
वित्तिय संस्थामा रोजगारीको अवसर